China Fins အမျိုးအစား (ဆီလီကွန်နှင့် ရေစိုခံ) ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |JYD
Fins အမျိုးအစား (ဆီလီကွန်နှင့် ရေစိုခံ)
အစိုင်အခဲ polypropylene ကျောထောက်နောက်ခံသည် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီး အမှိုက်ကို လျှော့ချပေးသည်။
1. နှစ်ထပ်၊ ပျော့ပြောင်းနိုင်သော၊ အတားအဆီးရှိသော ဆူးတောင်များ နှင့် တပ်ဆင်ထားသော "pile ဒါရိုက်တာများ" တို့သည် အဖွင့်အား နည်းပါးပြီး ပွတ်တိုက်မှုနည်းသော အကောင်းဆုံးတံဆိပ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်
2. အစိုင်အခဲ polypropylene ကျောထောက်နောက်ခံထည့်သွင်းခြင်းသည် အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီး အမှိုက်ကို လျှော့ချပေးသည်။
3. Pile height နှင့် backing width သည် JYD ၏ထူးခြားသောယက်မထုတ်လုပ်ရေးစနစ်များကြောင့် အမြဲတမ်းတူညီပါသည်။
4. JYD Fin weatherseals များသည် လေနှင့်ရေ စိမ့်ဝင်မှုမှ တင်းကျပ်သော တံဆိပ်နှင့် အတားအဆီးများကို အာမခံသည့် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိသည်။
5. ချည်နှောင်ခြင်း၊ ကွဲထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆန့်ထုတ်ခြင်းတွင် ချည်နှောင်ခြင်း၊ ကွဲထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆန့်ထုတ်ခြင်းတွင် ဗဟိုမဟုတ်သော Pile ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါ။
6. JYD ၏ထူးခြားသော ultrasonic ဂဟေဆက်ခြင်းသည် ဆူးတောင်များ၊ အမျှင်များနှင့် အထောက်အပံများကို ဖန်တီးနေစဉ် သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေစဥ်အတွင်း မကွဲမကွဲစေမည့် ပေါင်းစည်းထားသော စည်းလုံးညီညွှတ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
7. ဆူးတောင်များ သို့မဟုတ် ပိုပျော့သော ဆူးတောင်များ လိုအပ်ပါသလား။ငါ့အကြောင်းမေးပါ။
တစ်လိပ်တွင် 100-200m၊ တစ်ပုံးလျှင် 4-8rolls၊ 20ft container တစ်ခုတွင် 370ပုံး၊ 40ft container တစ်ခုတွင် 750ပုံး
ပို့ဆောင်မှုအသေးစိတ်: အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက် 10-18 ရက်အတွင်းနှင့်သိုက်များအတွက်ပေးဆောင်ပါ။
A: 1. ပထမဦးစွာ ရက်ကန်းရန်။
2. ဒုတိယအနေဖြင့်၊ ကော်နှင့်ရာသီဥတုအမြှေးပါးများကိုခွဲရန်၊
3. လိပ်ရန်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် Semi အလိုအလျောက်လှိမ့်စက်ရှိသည်။မြန်မြန်;
4. အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်။အရည်အသွေးညံ့သူများသည် စွန့်ပစ်ခံရပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သူများသည် ထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
မေး- အရင်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အရည်အသွေး ပြဿနာတွေက ဘာတွေလဲ။ဒီပြဿနာကို ဘယ်လိုတိုးတက်ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ။
A: ပြတင်းပေါက်များနှင့် တံခါးများကို ရောင်းချပေးသော customer ရှိပါသည်။ပြတင်းပေါက်များနှင့် တံခါးများ၏ ကွက်လပ်များအတွင်းသို့ ထည့်ရန် ခက်ခဲသော်လည်း တံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များကို တွန်းဆွဲသည့်အခါ ချောမွေ့ခြင်းမရှိကြောင်း ၎င်းတို့က ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြသည်။ချက်ချင်း စစ်ဆေးဖို့ အင်ဂျင်နီယာကို ခေါ်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ pile weather strips များ၏ သိပ်သည်းဆသည် ၎င်းတို့အတွက် မသင့်လျော်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့အတွက် နမူနာများ ထုတ်လုပ်ရန် သိပ်သည်းဆကို ချက်ချင်း ချိန်ညှိပါသည်။ဖောက်သည်တွေရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရတာ ကောင်းပါတယ်။ထိုအချိန်မှစ၍ သူတို့သည် အမှာစာများ ထားရှိကြပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များကိုသာ ထုတ်လုပ်သည့် စက်တစ်ခုရှိသည်။
ယခင်- ဆီလီကွန် အမျိုးအစား
နောက်တစ်ခု: တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သူ အလူမီနီယမ် ဟာ့ဒ်ဝဲ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါး ရာသီဥတုဒဏ်ခံ
Non Silicone Pile Strip
Silicone Pile Strip၊
Silicone Wool Pile Weather Strips
5*15mm မီးခိုးရောင်စုတ်တံ ရာသီဥတုဒဏ်ခံခြင်း
3P3L အနက်ရောင် ဆီလီကွန်မီးပုံ ရာသီဥတုဒဏ်ချက်များ
2fins 7*6mm ဆီလီကွန်ပုံ ရာသီဥတုဒဏ်ချက်
Windows & Doors အတွက် Pile Weatherstrip